साउदी अरवमा इतिहाँसमै पहिलोपटक लगायो महिलाको लागि नयाँ नियम, अब बुर्कै बिना पनि हिड्न पाउने ! - Nepal Insider
Home/अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/साउदी अरवमा इतिहाँसमै पहिलोपटक लगायो महिलाको लागि नयाँ नियम, अब बुर्कै बिना पनि हिड्न पाउने !
साउदी अरवमा इतिहाँसमै पहिलोपटक लगायो महिलाको लागि नयाँ नियम, अब बुर्कै बिना पनि हिड्न पाउने !
309 Less thanaminute
साउदी अरबले पहिलो पटक पर्यटकहरुलाई पनि प्रवेशाज्ञा दिने निर्णय गरेको छ । अति रुढीवादी मुस्लीम मुलुक साउदी अरबले शुक्रबार पर्यटकहरुलाई पनि स्वदेशमा स्वागत गर्ने घोषणा गरेको हो । तेलको व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको यस मुलुकमा अवदेखि पर्यटनलाई पनि अर्थतन्त्रको अर्को पाटोको रुपमा विकास गर्न लागिएको बताइएको छ ।
घुम्नका लागि विदेशी नागरिकहरुलाई खुल्ला गरिएपनि केही सर्त भने कडा बनाइएको छ । विषेश गरेर महिलाका लागि पहिरनमा आचारसंहिता नै बनाइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । घुम्न जाने महिला पर्यटकले अब अनिवार्य अबया(बुर्का जस्तै पहिरन) लगाउन नपर्ने भएको छ। तर महिलाहरूले सार्वजनिक स्थलहरूमा भद्र पहिरन लगाउनु पर्ने नयाँ नियममा उल्लेख छ। विश्व पर्यटन दिवसकै दिन आएको साउदी अरबको यो घोषणाले विश्वको पर्यटन क्षेत्रको दायरा थप फराकिलो भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
“हामीले आज इतिहास रचेका छौँ,” देशका पर्यटन प्रमुख अहमद अल खातिबद्धारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । उहाँले थप लेख्नु भएको छ, “हामीले पहिलो पटक संसार भरका पर्यटकहरुका लागि साउदी अरबलाई खुल्ला गरेका छौँ ।”
विश्वका ४९ देशका व्यक्तिहरुले अनलाईन मार्फत् प्रवेशाज्ञाका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रवेशाज्ञा पाउन अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोपेली देशहरुलगायत रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चेन्नाईबाट १:४५ मा काठमाडौं प्रस्थान भयो
प्रधानमन्त्री इमरानले भने, ‘अति भयो अब भारतमाथि आक्रमण गरौ’
एम्बुसमा परी १० प्रहरी अधिकृत मारिए
भर्खरै विबाहित दुलहीले जे हर्कत गरे थाहा पाउँने संसारका सबै चकित !
नेपालका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गरे यस्तो घोषणा !